"Emva kobumnyama." Inoveli efanelekileyo ukuqala noHaruki Murakami. | Uncwadi lwangoku
Emva kobumnyama. Incwadana efanelekileyo yokuqala kunye noHaruki Murakami.
UMurakami Ngomnye wabo babhali ababangela imbeko ethile phakathi kwabo bangawaziyo umsebenzi wabo. Iinoveli zombhali waseJapan zidume ngokudideka, ukuziqhenya, nokungaqhelekanga. Emva kwayo yonke loo nto, kukungaqondi okuqhelekileyo okufundwayo (ngexa siphinde sichaze amagama omnye umntu ngokungachanekanga) kufuneka sidibanise Umahluko ocacileyo wenkcubeko. AmaJapan awacingi okanye azive njengabantu baseYurophu. Oku kubhalwe kwimfuno yamanqaku kwiincwadi zakho ukucacisa amagama anje i-hikikomori, otakut koko.
Nangona kunjalo, ukungena kwingxelo ye- UHaruki Murakami Kulula ngakumbi kunokuba kunokuvakala. Kwaye kumaxesha amaninzi amava amnandi kakhulu. Ngale nto, ndincoma inoveli emfutshane Emva kobumnyama (ア フ タ ー ダ ク ク Afutā Daku ngesiJapan), ebizwa ngegama Ingoma yejazz Indawo ezintlanu emva kobumnyamanguC Curtis Fuller. Esi siqwenga sigcwele ngaphezulu kwamaphepha angama-240 Kwinoveli ethi ngobunono kodwa ngokuqinileyo isikhokele ngesandla ngesandla ubusuku obudlamkileyo baseTokyo. Kwimeko embi kakhulu, iya kusinceda sazi ukuba siyavana na nombhali okanye hayi. Nokuba ku Uninzi luya kuthandana nehlabathi lamaphupha eMurakami.
IJazz, iikati kunye nobumnyama
Ii-arcade ezinkulu zigcwele ulutsha. Izandi ezikwikhompyutha. Amaqela abafundi baseyunivesithi ababuya ethekweni. Abakwishumi elivisayo abaneenwele ezimhlophe ezimdaka kunye nemilenze eyomeleleyo bejonge phantsi kwe-miniskirt. Oonobhala abanxibe iisuti ezibaleka iindlela ezinqumlayo ukuze bangaphoswa luloliwe wokugqibela. Okwangoku, amabango e-karaoke ayaqhubeka ukumema ngovuyo. […] Sisekupheleni kokwindla. Umoya awubhudli, kodwa umoya uyabanda. Ngexesha elifutshane kakhulu usuku olutsha luya kuqala.
Ngala mabinzana uMurakami asikhokelela kuwo Izitalato zetokyo. Inoveli ityhila ngobusuku obunye, kumntu wesithathu, kunye nolwimi lwe-cinemographic, ngokungathi sasibona isenzo ngekhamera. Kwelinye icala, izahluko, endaweni yegama, zibonisa iwotshi ephawula ixesha ezenzeka ngalo ezi ziganeko.
Ibali liqala nini ManguAsai, oneminyaka elishumi elinesithoba umfundi, uyavumelana naye UTakahashi Tetsuya, imvumi yomculo wejezi, ngaphezulu kwekofu eDenny. Kungekudala bafumanisa ukuba babedibene ngaphambili, ngexesha eliphindwe kabini apho udadewabo wayethathe inxaxheba, UEri Asai. Ngenxa yoku kuhlangana, uMari uza kuhlala namava ahlukileyo nabanye abantu, kuyacaca ukuba yinto entle, ngelixa udadewabo ehlala kwilizwe elisondeleyo kumaphupha kunakwinyani.
Isimbozo sohlobo lweMaxiTusquets Emva kobumnyama ngeSpanish.
Lo ngumxholo webali lenoveli, ongabalulekanga kangako. Yintoni eyenza ukuba ibali lingalibaleki ubude balo kunye iingxoxo ezinomdlakunye nobumnyama bayo umhlaba wokubola okumnandi. Zonke zihonjiswe jazz (UMurakami ngumthandi womculo obhengeziweyo), amantombazana aneenwele ezinemibala, kunye ikati. Ndikucebisa ukuba ungakhangeli ulwazi oluninzi malunga nengxoxo yakhe kwaye uliyekele ngokwalo ibali lisothuse.
Amacala amabini engqekembe enye
Kubantu, iinkumbulo zingamafutha avumela ukuba baqhubeke nokuphila. Kwaye ulondolozo lobomi alubalulekanga ukuba ezo nkumbulo zilungile okanye akunjalo. Zizibaso ezilula.
Leer Emva kobumnyama Kufana nokufunda iincwadi ezimbini ezifakwe ngaphakathi ekugqibeleni zidibene. Eyokuqala ibonisa kwiokiso yobomi bobusuku baseTokyo, i iintlungu ezincinci yemiphefumlo eshukumayo kwikomkhulu laseJapan, kunye Iingxoxo malunga nokuba yintoni esona sitya sihle kwindawo yokutyela ebonakala ngaphandle kweemovie Ipulp engeyonyani. Ezi ncoko, nangona zibonakala zingenamsebenzi, ziphela kancinci zisazisa ukuba banjani abalinganiswa:
"Ndimfutshane, ndinesifuba esincinci, iinwele zigcwele ii-swirls, umlomo wam mkhulu kakhulu kwaye, ngaphezulu koko, ndine-myopia kunye ne-astigmatism.
"Abantu bayibiza loo nto 'ngobuntu'. Nganye injalo.
Enye incwadi ingaphezulu entsonkothileyo kwaye mnyama. Incoko yababini inika indlela kwiinkcazo ezichazayo ezisibonisa into eyenziwa ngu-Eri Asai, okanye amaphupha. Ezi ndinyana ziphazamisa umfundi, kodwa zilawule ukuvusa umdla wakhe wokufuna ukwazi. Zonke zisekwe kwisicatshulwa esilandelayo:
Imaski idibanisa, ngeedosi ezilinganayo, umlingo kunye nokusebenza. Ishiyelwe kuthi ukususela kumaxesha amandulo kunye nobumnyama, ithunyelwe kuthi ukusuka kwixesha elizayo ngokukhanya.
Yintoni kwimeko yenoveli efuzisela umothuko womntu, ophethe ilifa lemveli kunye nembali yomnombo wakhe, kunye nehlabathi langoku. Kule mihla yethu akusekho luvo lobumbano lwesiqu sakho, ke ngoku kuluhlobo ngaphambi kwenkulungwane yama-XNUMX. Ukuzazi kwabantu kwahlulelene, kwaye imaski imele enye yezo ndawo zethu, leyo ifihla zonke ezinye.
Ngamafutshane: nabani na unokufumana into enomdla kwinoveli, nokuba ingobuso bayo, enye, okanye zombini. Kuko konke oku, nokunye okuninzi, ndincoma kakhulu ukufunda Emva kobumnyama de UHaruki Murakami.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Â«Emva Kobumnyama.Â» Inoveli egqibeleleyo ukuqala ngoHaruki Murakami.
Iincwadi ezi-7 eziwine i-Oscar ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo